Retail uye Consumer Kutenga Maitiro e2021 | Martech Zone
Kana paine imwe indasitiri iyo yatakaona ichishandurwa zvinoshamisa gore rapfuura iri raive rekutengesa. Mabhizinesi asina chiono kana zviwanikwa zvekutora manhamba akazviwana ave matongo nekuda kwekukiya uye denda.
Sekureva kwemishumo kuvharwa kwezvitoro kwakawedzera zviuru gumi nezviviri muna 11,000 paine chete 2020 matsva matsva anovhura.
Taura Bhizinesi & Zvematongerwo enyika
Izvo hazvina kunyatso shandura kudiwa kwevatengi zvakapakirwa zvinhu (CPG), zvakadaro. Vatengi vakaenda online uko kwavakagadzira zvigadzirwa kuti vatumire kwavari kana ivo vaitora piki.
RangeMe ipuratifomu yepamhepo inogonesa vatengi vezvitengesi kuti vawane zvigadzirwa zviri kubuda vachipa simba kune vanotengesa kuti vakwanise uye nekukudza zvigadzirwa zvavo. Vakagadzira iyi yakadzama infographic pane yepamusoro yekutengesa uye CPG maitiro e2021.
22021 ichave nguva yemabhizinesi kune ramangwana-humbowo pachawo isu tichienderera mberi nekufamba nemhedzisiro yedenda repasi rose. Kune vatengi, vatengesi, uye vatengesi, chitsva chigadzirwa kuwanikwa chichava ne hyperfocus pane hutano uye hutano uye kukura kwekusimudzira uye kwakasiyana kwekutanga. Pachavewo nekusimbiswa pakutenga zvirinyore, kutsvaga kwenzvimbo, uye mutengo-kuziva.
Iwo Wepamusoro Retail uye CPG Maitiro e2021
Pamusoro Pekutengesa Maitiro
Mutengo-unoziva Kutenga - 44% yevatengi vanoronga kudzikisira pane zvisina kukosheswa kutenga sezvo urovha hwehuwandu huri kuramba huchikwira.
Tenga-Zvino-Bhadhara-Gare gare - Pakave nekuwedzera kwe20% Gore-pamusoro-Gore (YoY) yekutenga-ikozvino-kubhadhara-kwapamberi kwekutenga - kuverenga madhora makumi maviri nemana emadhora mukutengesa.
Diversity - Munguva ino nyowani yekuziva kutenga vatengi, indasitiri iri kushanda mukuunza kusanganisa uye kusiyanisa kumberi uye kuisa zvigadzirwa zvevashoma kumberi nepakati.
kuenderera - Vatengi vanoziva nezvezvakatipoteredza vanoda mabhureki ekuderedza huwandu hwekupakata kwavanoshandisa.
Shop Small, Shop Local - 46% yevatengi vainyanya kutenga nemabhizimusi emuno kana madiki zororo rekupedzisira kupfuura mazororo apfuura.
Zvokudya - 53% yevatengi vanoronga kutenga munzira dzinovachengetera nguva, kunyangwe isiri iwo wakaderera mutengo.
Ecommerce - Paive nekuwedzera kwe44% mukutenga pamhepo, zvakapetwa katatu chiyero chegore negore muUnited States kwemakore apfuura!
Yakachinja Brick & Duri - 44% yevatengesi vepamusoro mazana mashanu vane zvitoro zvepanyama vakapa curbside pickup, chikepe-kuchitoro, uye Tenga Pamhepo, Tora Up-Chitoro (BOPIS)
Consumer Kutenga Maitiro Maitiro
Hunyoro uye Premium Indulgences - Kutengesa kwoumbozha mu2020 kwakawedzera 9% mugore rapfuura sezvo vanhu vaishanda kubva kumba vaitaridzika kugadzirisa nharaunda uye kuzvipuruzira.
Pfungwa neMuviri Kudya - 73% yevatengi vakazvipira kutsigira hutano hwavo; 31% yekutenga zvimwe zvinhu zvakagadzirirwa hutano hwavo (kusanganisira huremu, hutano hwepfungwa, hutachiona, nezvimwewo)
Gut Health - 25% yevatengi vepasirese vanotambura nehutano hwekudya Vatengi vari kusvika kune zvigadzirwa zvinozvitsigira uye vari kudzivirira zvigadzirwa izvo zvisingaite.
Apparel Bounce Back - Sezvo denda rinodzoka, indasitiri iri kutarisira kukura kwe30% mukutengesa zvipfeko gore rino.
Kudyara-Kubva Boom - Paive ne231% YoY kukura munaKurume yezvitsva zvinotengesa zvirimwa-zvinotengesa zvinotungamirwa nehutano, chikafu chakasiyana, uye kuwanikwa kwechigadzirwa.
Kuseka - Paive nekukwira kwe42% mukutsvaga kweGoogle kune zvisina-zvinwiwa zvinodhaka!
Global Consumer Kutenga Maitiro Maitiro
Kudzivirira Hutano - 50% yevatengi veChinese vanoronga kushandisa yakawanda pakudzivirira hutano hwekuchengetedza, mavitamini uye zvinowedzerwa, uye chikafu chinogadzirwa.
Yemahara-Kubva Chigadzirwas - Paive nekukura kwe9% yezvigadzirwa zvekusashivirira chikafu. MuVietnam, semuenzaniso, isina mukaka-isina mukaka dzimwe nzira senge nati-based mhando dzemukaka dziri kukura mukuzivikanwa.
Vegan - 400,000 Vatengi veBritish vakaedza vegan chikafu mu2020! Mazana matanhatu emakambani eUK akakwidziridza Veganuary uye akatangisa zvigadzirwa zvinosvika zana nemazana maviri zvevegan.
Zvemumba Sourcing - 60% yevatengi muSpain vakaona zvigadzirwa zvekuSpanish zvekutanga sechinhu chakakosha pakutenga. Vatengi veGerman vakachidzira iyo kutenga yemuno maitiro ekusimudzira uye nemagariro mutoro.
Tags: nguvobopiszvidhinha nedopetenga online mubhadharo muchitoroyakavharwa-chiuno chinongedzomutengi kutenga maitiromutengi akarongedza zvinhuyekumba kutsvagakunze kwekutengesaomnichannel kushambadzirakutengesa onlinekudzivirira hutanomutengo-unozivakutenga zvekutengesazvitengesi maitirokuchengetedzakueche